Photovoltaic ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ Huayao Photovoltaic Box သည် ယွမ်သန်း ၄၀၀ နီးပါး ငွေကြေးထောက်ပံ့ ခဲ့သည် - Pandaily
Photovoltaic ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ Huayao Photovoltaic Box သည် ယွမ်သန်း ၄၀၀ နီးပါး ငွေကြေးထောက်ပံ့ ခဲ့သည်
Jan 13, 2022, 12:37ညနေ 2022/01/13 14:13:02 Pandaily
Photovoltaic ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ Inner Mongolia Huayao Optoelectronics Technology Co., Ltd. (Huayaoစုစုပေါင်း ယွမ်သန်း ၄၀၀ နီးပါး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၂. ၉ သန်း)TopoScend Capital က TFTR Investment နှင့် Galaxy Capital ကဲ့သို့သော အခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဦး ဆောင်သည်။ ဤ ရန်ပုံ ငွေများကို ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု နှင့်၎င်း၏ စျေးကွက် ဝေ စုကို တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့် နိုင် ရန်ကူညီ လိမ့်မည်။
2019 ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Huayao Optoelectronics သည် semiconductor ပစ္စည်းများနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှု အပူ အတွက် တစ်ခုတည်းသော crystal silicon wafers နှင့် rod များ ကိုအဓိက ထုတ်လုပ်သည်။
ကုမ္ပဏီသည် photovoltaic စက်မှု လုပ်ငန်းတွင် အရည်အသွေးမြင့် တစ်ခုတည်းသော crystal silicon wafers များကို ပေးသွင်း သူ ဖြစ်လာ ရန် ကတိက ဝတ်ပြု ထားသည်။ ၎င်း၏ silicon wafer နည်းပညာ သိုက် သည် ကြွယ်ဝ သည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းတွင် လိုင်စင် ၂၂ ခုနှင့် ဆိုင်းငံ့ ထားသော မူပိုင်ခွင့် များရှိပြီး ၎င်း၏ ဆီလီကွန် န့် အထွက် နှုန်းသည် ၉၈% ကျော် နိုင်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် Huayao Optoelectronics သည်တရုတ်နိုင်ငံ Inner Mongolia နှင့် အရှေ့ပိုင်း Changzhou တွင် ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း နှစ်ခု ကိုတည်ဆောက် ခဲ့ပြီး အမှန်တကယ် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည် 4GW ရှိသည်။
Huayao Optoelectronics မှ အာရုံစိုက် သည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic စက်မှုလုပ်ငန်း သည်တရုတ် ဗဟို စီမံကိန်းရေးဆွဲ သူများက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထောက်ခံ သည့် စိမ်းလန်းသော စက်မှုလုပ်ငန်း များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နည်းပညာ တိုးတက်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် များ လျှော့ချခြင်းနှင့် အစိုးရ မှချမှတ် ထားသော မက်လုံး ပေါ်လစီ များကြောင့် ပြည်တွင်း photovoltaic စက်မှုလုပ်ငန်း သည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကာလ သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Stoke Voltaire သည် Lightspeed ဦး ဆောင်သော Pre-A ရန်ပုံငွ ေဒေါ်လာ ၇. ၈ သန်း ရရှိ ခဲ့သည်
ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချ ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှု ကြီးထွား လာသည်နှင့်အမျှ သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင် လုပ်ငန်း ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နယ်ပယ် သည်ပိုမို ကျယ်ပြန့် လာသည်။ Photovoltaic စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှု ကိုဥပမာ တစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်း သည်မြင့်မားသော စွမ်းအင် သိပ်သည်းဆ ၊ မြင့်မားသော လုံခြုံ မှုနှင့် ဂေဟစနစ် ဖော်ရွေ မှု၏ လက္ခဏာများ ကိုထင်ဟပ် စေသည်။ ကုန်ကျစရိတ် ၊ လုံခြုံ မှု၊ ဂေဟ ဗေဒဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ နှင့်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည် စသည့် အချက်များ ကိုအပြည့်အဝ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပြီးနောက် photovoltaic စွမ်းအင် ထုတ်လုပ် မှုသည် ရေအား လျှပ်စစ်နှင့် နျူကလီးယား စွမ်းအင် ကဲ့သို့သော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း မဟုတ်သော စွမ်းအင် အရင်းအမြစ် များထက် သိသာသော အားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည် ကာဗွန် ကြားနေ ရေးအတွက် ကြိုးပမ်း မှု ၏အဓိက အင်အား ဖြစ် လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့် ရပြီး လာမည့် နှစ် များအတွင်း သိသိသာသာ တိုးတက်မှုများကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။
စတင်တည်ထောင် ချိန် မှစ၍ Huayao Optoelectronics သည် ကုန်ကြမ်း ပေးသွင်း သူများနှင့် တည်ငြိမ်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရရှိခဲ့ပြီး နည်းပညာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီသည် ၂၁၀ မီလီမီတာ ကြီးမားသော ဆီလီကွန် န့် များနှင့် N-type တစ်ခုတည်းသော ကြည်လင်သော ဆီလီကွန် န့် များ ကိုစတင် တီထွင်ခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေး ကိုစတင် ခဲ့သော 12GW single-crystal silicon wafer project သည် ထုတ်လုပ်မှု စတင် ပြီးနောက် လုပ်ငန်း ၏ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည် ကိုပိုမို တိုးတက် စေလိမ့်မည်။